Japana · Avrily, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Japana · Avrily, 2019
Septambra 2015 8 Lahatsoratra
Avrily 2015 11 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Japana tamin'ny Avrily, 2019
Japana: Fandikanteny Ifarimbonana amin'ny Fotoan'ny Krizy
Fiteny 16 Avrily 2019
Niditra teo amin'ny sehatra iraisampirenena i Japana rehefa voadonan'ilay horohorontany nahatsiravina tamin'ny 11 Martsa 2011. Raha toa ka nikoriana avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao ireo fanadihadiana, hatsaran-tsitrapo, torohevitra sy fanomezana ara-bola maro, nanao izay vitany kosa ireo olompirenena tsotra, tamin'ny fandraisana anjara tanatin'irep tetikasa fandikan-teny ifarimbonana ohatra.
Ny t-shirt hafahafa nanaovan'ilay mpilalao baseball malaza misotro ronono Ichiro Suzuki no vao maika nankafizan'ny mpankafy azy bebe kokoa
Fanatanjahantena 16 Avrily 2019
Nanambara ny fisotroan-dronony vao haingana i Ichiro, ilay mpilalao baseball nahavita ny zava-bita tsara indrindra maro kokoa mihoatra ireo mpilalao hafa rehetra.
Tafatafam-baovao miaraka amin'i Haruki Murakami mijery indray ny Heisei Japan
Mediam-bahoaka 11 Avrily 2019
Tsy fantatro ny antony, fa toa novakiana ny bokiko, indrindra rehefa nirodana sy nanjavona tampoka izay nanananay teo aloha. Mahatsiaro aho fa nanomboka nekena tany Japan (ny bokiko) manodidina ny fotoana nanombohan'ny vanim-potoanana Heisei tamin'ny nahafatesan'ny amperora.
Ny Fiainana, Ny Fahafatesana, Ary Ireo Saribakoly Ampitenenina: Sary Fanentanana An'i Tomoyasu Murata
Media sy Fanoratan-gazety 04 Avrily 2019
Teraka tamin'ny taona 1974 i Murata, namokatra sarimihetsika nanomboka tamin'ny taona 1998 tany ho any ary vao haingana nahasarika ny sain'ny tany ivelan'i Japana.
Azia Atsimo-Atsinanana: Fitsangantsanganana An-Tsambo Mampanonofy sy ny Finamanana
Broney 02 Avrily 2019
Mandraisa sambobe fitsangantsanganana iray tsara tarehy, fenoy tanora 300 mafana fo avy amin'ny Fikambanan'ireo Firenena ao Azia Atsimo Atsinanana (ASEAN), ataovy ao koa i Japana, ary ireo hetsika ara-kolontsaina sy sosialy, dia afangaroy ao. Vokatra azonao: fifamatorana mafy sy finamanana mandra-maty